၉ - ကူးစက်ရောဂါ - ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြန်အမ်းငွေများအတွင်းသင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » ၉ ရောဂါကူးစက်ခံနေရစဉ်အတွင်းသင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများကြားတွင်ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအခြေခံနားလည်မှုမှာဤအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမှုသည်အားနည်းသောကိုယ်ခံအားစနစ်ရှိသူများသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိသူများသေဆုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထို့ကြောင့်သန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့၏ကျန်းမာရေးကိုရုတ်တရက်စိတ်ဝင်စားလာပြီးကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်လိုကြသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်လိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလက်ခံကျင့်သုံးပါကသတင်းကောင်းမှာသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ခုခံကာကွယ်မှုကိုအချိန်တိုအတွင်းတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းသင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရန်သင့်အားပြသမည့်နည်းလမ်း (၉) ခုရှိသည်။ ဤခုခံအားကျဆင်းမှုဆိုင်ရာအကြံပေးချက် ၉ ခုသည်ဤကပ်ရောဂါတစ်လျှောက်သင့်အားအစွမ်းကုန်ကူညီပေးလိမ့်မည်။
၎င်းသည်အအေးမိခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်တုပ်ကွေးရောဂါကိုရှောင်ရှားရန်အများဆုံးအကြံပြုသောဗီတာမင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်။ သို့သော်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ဗီတာမင်စီသိုလှောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်ဗီတာမင်စီဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည်ဝါးစားနိုင်သောတက်ဘလက်တစ်မျိုး၊ Gummies သို့မဟုတ်ရေကဲ့သို့သော Emergen-C ကဲ့သို့သောရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိသောဓာတ်သတ္တုများ၊ သွပ်သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ သငျသညျတက်ကြွစွာစားသုံးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းရှိကျန်းမာရေးဆိုင်မှသွပ်ဖြည့်စွက်များကိုအလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နေ့စဉ်ရာခိုင်နှုန်းမျှသာလိုအပ်သည်။
သွပ်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်၊ ကုသမှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်နှင့်အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါ၏အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အသက်ကြီးသူများသည် COVID-19 ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ယခုအခါအထူးလိုအပ်သည်။
Probiotics သည်သင်၏အူရောဂါပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးရလဒ်အနေဖြင့်သင်၏ခုခံမှုသည်ပိုမိုအားကောင်းလာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပantibိပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကိုကူညီသည်နှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြmostနာများကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။ သငျသညျကျိန်းသေ probiotics စားသုံးခံရဖို့ချင်တယ်။
ဒိန်ချဉ်၊ miso၊ kombucha၊ kimchi နှင့် tempe တို့သည်သင်၏အစားအစာတွင်ပါဝင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သော probiotics များဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်မှအချို့ကိုသင်ရနိုင်ပြီးဆေးတောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ရက်မှ ၂ ရက်သောက်နိုင်သည်။ ကြက်သွန်ဖြူကိုစားတာဟာကောင်းပေမယ့်ဖြည့်စွက်မှုဟာပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆေးတစ်လုံးမှရရှိတဲ့ allicin ပမာဏကိုရရှိဖို့ကြက်သွန်ဖြူများစွာလိုအပ်ပါတယ်။
သင်က Dracula မဟုတ်ဘဲ COVID-19 ကိုတားဆီးရန်သင်ကြိုးစားနေသည်။ ဆေးလုံးကိုမျိုရန်လွယ်ကူသည်။
Self- အထီးကျန် hibernation မဆိုလိုပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်သင်၏သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးသင်၏စွမ်းအားနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။
သင်အိမ်၌နေလျှင်ပင်သင်၏နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများစွာရှိသည်။ P90X သို့မဟုတ် Insanity Max ကဲ့သို့သောအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုဆက်လုပ်ပါ။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ သင့်အိမ်၏လုံခြုံမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်ပါ။ ကယ်လိုရီကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးထို endorphins များကို Beachbody on Demand ဖြင့်စတင်ပါ။
အစွန်းရောက်လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ ဒါကြောင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းပေမယ့် overdo ပါဘူး။ Coronavirus လှည့်ပတ်သွားတာနဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်အားနည်းမှုကိုမလိုချင်ဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အထူးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေနေပါက Danette May's ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Flat Belly Fast DVD ဖြစ်သည် သူမသာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့အခမဲ့ကမ်းလှမ်းနေသည်။ သငျသညျပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်အားလုံးရေကြောင်းများအတွက်သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။
အာရုန်နှင့်ပေါလုတို့၏ quarantine လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ် ထို့အပြင်အလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်လျှင်မိနစ် ၉၀ အတွင်းဤအွန်လိုင်းအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်သည်အားကစားရုံမပါဘဲလေ့ကျင့်ခန်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Coronavirus Quarantine တွင်ပုံသဏ္getာန်ရနိုင်သည်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်သည်။
6 ။ အိပ်
နေ့စဉ် ၇ နာရီမှ ၈ နာရီအိပ်ပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောခန္ဓာကိုယ်သည်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသောခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။
7 ။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု
အဘယ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်းအားလုံးအကြောင်းကိုအကြောင်းစဉ်းစား? ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်သင်စားသောအရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းကာလအကြားသံသရာလည်စေသောအစားအစာပုံစံဖြစ်သည် မည်သည့်အစားအစာများကိုသင်စားသင့်သည်၊ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်သမားရိုးကျအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအစားအစာမဟုတ်သော်လည်း ပို၍ တိကျစွာစားခြင်းပုံစံအဖြစ်ဖော်ပြသည်။
Lean Fast RFL သင်၏အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှသင်စတင်နိုင်သည့်အလွန်ကြီးစွာသော ၁၂ ပတ်ကြာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဂဏန်းတွက်စက်များ၊ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာအဆီဆုံးရှုံးမှု၊ ကြွက်သားများကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပိန်သောအားကစားခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုအတိအကျပြသသည်။
သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည်မြင့်တက်လာပြီးသင့်တော်သောအစာစားအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာပြီးသင်၏စံပြအလေးချိန်သို့ ဦး တည်သွားပါကသင်၏ကျန်းမာရေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် (ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသော) အသုပ်ကိုစားပါက၊ သင်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့်ထိပ်သုပ်တစ်သင်းလုံးပါဝင်သည်.
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ သင်၏အရက်ကိုလျော့ချပါ။ သင်၏သကြားစားသုံးမှုကိုလျှော့ချပြီးကျန်းမာရေးမကောင်းသောမည်သည့်အကျင့်ကိုမဆိုဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အခက်အခဲကိုကြိုဆိုပြီးကျော်လွှားပါ။ ဤအကျင့်ဆိုးများကိုဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့်သင်သည်အသစ်စက်စက်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။
အိမ်အပြင်ဘက်မှအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါအိပ်ရာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အိပ်ရာပေါ်တွင်မထိုင်ပါနှင့်။ သင့်အဝတ်အစားပေါ်ရှိပိုးမွှားများသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်နားမလည်ပါ။ သင့်အိမ်ရှိအခြားထုတ်ကုန်များသို့ဖြန့်ရန်မလိုပါ။ အဝတ်လျှော်စက်ထဲသို့ချက်ချင်းသွင်းပါ၊ ရေချိုးပါ၊ ထို့နောက်သန့်ရှင်းသောအဝတ်အချို့ဝတ်ပါ။
ကပ်ရောဂါတစ်ခုအတွင်းသင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမည်သို့မြှင့်တင်နိုင်မည့်အကြောင်းဤအချက် ၉ ချက်ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင် COVID-9 သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌အခြေချရန်ကြိုးစားသည့်အခြားရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။